Alatsinainy Paska an-tsary
2011-04-25 @ 23:36 in Andavanandro
Alatsinain'ny paska 2011, niainga maraimbe tao an-trano ny tena noho ny asa. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanararaotra nitondra fakantsary na dia somary manelingelina noho ny habeny ihany aza ny tena. Faritra vitsivitsy teto an-drenivohitra no nandalovana ka nisy ny nopihana moa nisy ny nandalovana fotsiny. Nisinisy ihany ny olona saingy tsy betsaka noho ny mahazatra sady tsy naharenesana tabataba firy. Hafahafa ery izany Behoririka manoloana ny Avance Center ka hatreny amin'ny Irresistible ka tsy nisy ny mpivarotra amorondalana, mbola tsy famelaran-dry zareo entana ny fotoana nandalovako teny satria mbola tsy ampy tamin'ny fito maraina.
Mbola tsy nitanjozotra ihany koa ny fiara nivoaka iny faritra andrefana eny Anosibe sy Anosizato iny. Malalaka ny arabe saingy ny mahavariana eny amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana hatrany no tena itangoronan'ny mpivarotra amorony efa tafiditra anaty lalana. Hanina mbola manta no tena amidy amin'izany. Ireny ve no toerana azo antoka fa hahazoana mpividy voalohany? Mety ho izay saingy amin'ireny ihany koa no tena mora iasan'ny mpanendaka sy ny mpangaro-paosy voalohany. Tamin'ny ankapobeny izay lalana rehetra nandehanana tato an-tanàna dia malalaka avokoa.
Niditra an'i Mahamasina hatreo amin'ny fiantsonan'ny fiara Anosy mipaka mankeny amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana Mahamasina, anatin'ny Cité Jardin, no nahitana mpivarotra mitandahatra lava voalohany vao maraina andro alatsinainy. Indraindray mahatonga eritreritra sao ny alatsinainy no tsena eny fa tsy alakamisy intsony. Tena mihamiova ny tontolo saingy mihapotika ihany koa ny arabe.
Miakatra amin'iny Ankadilalana iny dia hitanao ireo fianakaviana manao andiany mandeha an-tongotra hamonjy ny sahan'i Tsimbazaza. Io no faritra anaty fefy andoavam-bola be mpitsidika tranainy indrindra araka ny fahalalako azy. Ny ankizy no tena maro. Tamin'ity andro ity dia nisokatra avokoa ny vavahady telo ananan'ny saha raha ilay iray afovoany alaiko sary ihany no misokatra mahazatra. Milahatra ny besinimaro amin'ireo vavahady telo ireo fa eo amin'ilay vavahady misokatra mahazatra no tena ifanotofan'ny mpivarotra hani-masaka ivarotana eny am-pita. Teo dia hita fa miovaova be ihany ny toetr'andro fa mbetika mitranga ny masoandro, mbetika mandrakotra tanteraka azy ny rahona sy ny rivotra mampangatsiaka.
Mivezivezy eny ihany, somary nahazo ny anaty tanàna indray ny tena. Tahaka ny hifanisa ny isan'ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara. Tetsy Ankadifotsy ohatra teo amin'ny fotoana izay nakako sary maraina no somary betsaka ny fiara nifanaretsaka raha somary mitsitaitaika ry zareo ny fotoana hafa tamin'ity andro ity. Inona tokoa moa izany no mety ho antony handehadehanana eny?
mikatona ny fivarotana madinika fa misy ny mpivarotra tsy miala mihitsy
Nandalo an'Akorondrano ny tena ka somary gaga ihany nandalo ity arabe efa nitarina tamin'ny andron'ny filoha teo aloha dia lazaina fa mbola hitarina hatrany. Tsy dia tena mahatadidy ny tombam-bidin'ny fanamboarana na fanitarana aho fa ny hitako dia hakelezina ny eo afovoany. Tsia, asiana faritra manasaraka angamba fa voatery ajanona avokoa manko ny fiara rehetra, ny mianavaratra rehefa hiainga avy any an-tranony hamonjy an'Antaninarenina ny filohan'ny FAT; ary ny fiara rehetra mianatsimo rehefa hody any Ambatobe kosa izy. Mety hahatratra adiny iray izany fanajanonana ny fiara rehetra izany indraindray satria efa niaina izany ny tena. Mba tsy ho ahiana hanakana ny fiaran'ny filohan'ny FAT intsony angamba ny fiaran'olo-tsotra rehefa vita itony fanasarahan-dalana itony.
Efa tena ny olo-tsotra tokoa ny mandeha an-tongotra na dia mety hahatratra ora iray na mahery aza izany. Miaiky ireto fianakaviana manao andiany ireto hamonjy an'i Masay (ny zaridaina namboarina natao hitsangatsanganana ery akaikin'Andranobevava moa izany?) aho fa vao maraina ry zareo ireto no hamakivaky iny lalana iny. Ny folakandro moa dia feno mpandeha an-tongotra avokoa iny lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra iny ka manjary tskaritra fa ny lalana be mpandeha andavanandro lasa vitsy na tsy misy olona loatra, fa ny lalana tsy dia ahitana mpandeha an-tongotra kosa no feno azy amin'ity andro iray ity. Izany tokoa angaha no atao hoe mitsangatsangana.
Teto indray ny olona no betsaka noho ny fiara
Rehefa tonga ny atoandro vao tena matevina ny fidirana mankao an-jaridainan'i Masay na dia efa feno tanteraka aza ny ao anatiny ao. Tahaka ny fahafinaretana moa indraindray ho an'ny sasany ny mifanositosika ao anatiny ao na dia ny hipetrapetraka aza no noeritreretina handehanana amin'ny faritra tahaka ireny.
Tsy dia nilahatra loatra ny fiara nivoaka ny fiara tamin'ny lalan'Analamahitsy iny. Tsy azo lazaina ho malalaka ihany koa anefa ny arabe fa somary afa-mandeha mafy avokoa izy rehetra. Teny Ambohitrarahaba ka hatreny amin'ny diako teny Sabotsy Namehana vao nisy ny fitohanan'ny fiara saingy tsy tena nitohana loatra fa nitanjozotra miadana no filaza azy. Ny mampihomehy dia mbola ahitana fiara fitaterana maty hatrany eny an-tsefatsefany eny ka ireny no tena mampisy ilay fitohanana fa tsy dia inona loatra. Sarotra manko ny hisongona fiara lehibe rehefa maromary koa ny fiara ifanenana.
Tranga iray voamarika ny fahamaroan'ny mpandeha scooter izay maro nanao taingi-telo na taingi-droa. Telo manko raha miaraka amin'ny zazakely, ary roa kosa ho an'ny mpivady na mpifankatia fotsiny. Heverina ho ala-olana amin'ny fitohanan'ny fiara izany rehefa tonga ny fodiana araka ny fijeriko azy.
Ny folakandro vao betsaka ny mpandeha an-tongotra no mamonjy ny afovoan-tanàna toy ny etsy Analakely sy Ambohijatovo. Eny no mipetrapetraka amoron'arabe tahaka ireny ankizy taloha tsy mahita atao mijery fiara mandalo ireny ny maro. Tena mahavariana indraindray ny mijery ireny olona ireny. Fa any anatiny any mety manantena ny hiditra anatin'ny fefin'ny kianjan'ny 13 mey ry zareo na dia hafanana be aza ny hozakaina ao. Sa kosa manimanina ny tolona natao? Tsy fantatro loatra fa ny maka sary no mahafinaritra ahy aloha!
Na teo aza izany dia orambe no tena nibahana teto Antananarivo ny folakandro nanomboka tamin'ny telo ora sy sasany teo ho eo ary tsy nitsahatra izany mandrak'alina afa-tsy nandritra ny fotoana fohy ihany. Nisy aza moa, tahaka ny teny Tsimbazaza no nisy havandra nirotsaka mihitsy. Tsy nody maina izany ny mpitsangatsangana tamin'ity indray mitoraka ity.
tsy misy zavamameno na mpikabary akory teny
fa mpanala voly ihany fa tsy nisy mpivarotra tato anaty olona tato an!
Jentilisa 26 avrily 2011, 01:38 maraina